Maxay Tahay Inaadan Marnaba Iibsan Website Cusub | Martech Zone
Tani waxay noqon doontaa qaylo. Ma ahan usbuuc in aanan haysan shirkado i weydiinaya inta aan ka qaadno a website cusub. Su'aasha lafteedu waxay kor uqaadeysaa calan cas oo fool xun oo caadi ahaan macnaheedu yahay inay waqti lumis ii tahay inaan ku daba joogo iyaga macmiil ahaan Sababta Sababtoo ah waxay eegaan degel websaydh ahaan mashruuc taagan oo bilow iyo dhammaad leh. Maaha… waa mid dhexdhexaad ah oo ay tahay in si joogto ah loo habeeyo loona rogo.
Himilooyinkaagu Si Wanaagsan ayey uga Gudban yihiin Websaydhkaaga
Aynu ku bilowno sababta aad xitaa u leedahay degel aad ku bilowdo. Degelku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shabakaddaada guud ahaan joogitaanka digital meesha sumcaddaadu ku dhisan tahay oo aad siin karto macluumaad aad loogu baahan yahay macaamiisha iman karta. Meherad kasta, joogitaankooda dhijitaalka ah maahan kaliya mareegtooda… waxaa ka mid ah:
Goobaha Tusaha - miyay ka soo muuqdaan baraha ay dadku ka raadinayaan wax soo saarkooda ama adeeggooda? Waxaa laga yaabaa inay tahay Angi, Yelp, ama tusayaal kale oo tayo leh.
Qiimeynta iyo Goobaha Dib u eegista - Iyada oo ay weheliyaan tusaha, miyay ka soo muuqdaan goobaha dib u eegista oo ma si wanaagsan ayey u maamulayaan sumcaddaas? Ma weydiisanayaan dib u eegis, ma ka jawaabayaan iyaga, oo waxay saxaan dib u eegista liidata?
YouTube - Miyay YouTube ku leeyihiin fiidiyowyo lagu bartilmaameedsanayo suuqooda iyo waxsoosaarkooda? YouTube waa mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn, fiidiyowguna waa dhexdhexaad muhiim ah.
Goobaha Saameynta - Ma jiraan goobo iyo shaqsiyaad saameyn ku leh bulshada oo leh taageerayaal ballaaran oo ka yimid dhagaystayaasha la wadaago? Miyaad raadineysaa inaad ka hesho aqoonsi barahaas?
Search matoorada - Iibsadayaashu waxay si firfircoon uga raadinayaan macluumaad khadka tooska ah si ay uga caawiyaan geedi socodkooda go'aan qaadashada. Ma joogtaa meesha ay raadinayaan? Ma leedahay a maktabadda taasi waa mid si joogto ah u cusbooneysiisa
Warbaahinta bulshada - Iibsadayaashu waxay daawanayaan ururada khadka tooska ah ka bixiya ee bixiya qiimaha socda isla markaana u jawaaba macaamiisha. Miyaad si firfircoon uga caawineysaa dadka dariiqyada bulshada iyo kooxaha internetka?
Email Marketing - Miyaad horumarinaysaa safarro, joornaallo war-bixinno ah, iyo warbaahin kale oo isgaarsiineed oo dibadda ah oo ka caawiya iibsadayaasha mustaqbalka inay safarka safarka ku maraan?
advertising - fahamka meesha iyo intee le'eg dadaalka iyo miisaaniyadda ay tahay in lagu dabaqo si loo helo hogaamin cusub intarneedka oo dhan waa inaan marnaba la iska indhatirin.
Isku-dubbaridka joogitaankaaga dhijitaalka ah ee dhexdhexaad kasta iyo kanaal kasta waa baahi daruuri ah maalmahan waana ka sii fog tahay dhismaha oo keliya bogga cusub.
Websaydhkaagu Marnaba Ha Noqon Dhammaad
Websaydhkaagu weligiis maahan soo gabagabeeyay. Sababta Sababtoo ah warshadaha aad ka shaqeysid ayaa sii wadaya inay isbeddelaan. Lahaanshaha degel websaydhku wuxuu la mid yahay yeelashada markab aad ku dhex mareyso biyaha furan. Waxaad ubaahantahay inaad si joogto ah ulaqabsato shuruudaha - hadey tartamayaan, kuwa wax iibsanaya, algorithms-ka makiinadaha raadinta, tikniyoolajiyadda soo ifbaxaya, ama xitaa alaabadaada iyo adeegyadaada cusub. Waa inaad sii wadataa hagaajinta socodkaaga si aad ugu guuleysato soo jiidashada, wargelinta, iyo beddelka martida.
Ma u baahan tahay isbarbardhig kale? Waxay la mid tahay inaad qof weydiiso, “Immisa ayey ku kacaysaa in caafimaad la helo?”Caafimaadka helitaanku wuxuu u baahan yahay cunid caafimaad leh, jimicsi, iyo dardar-dhisid waqti ka dib ah. Mararka qaarkood waxaa jira dib u dhacyo dhaawacyo qaba. Mararka qaarkood cuduro ayaa jira. Laakiin helitaanka caafimaad ma laha barta ugu dambeysa, waxay u baahan tahay dayactir joogto ah iyo hagaajin markii aan sii weynaano.
Waxaa jira dhowr isbeddel oo si joogto ah ugu baahan in lagu cabbiro, la falanqeeyo, oo wax looga beddelo websaydhkaaga:
Falanqaynta Tartanka - hagaajinta iyo hagaajinta si aad uga soocdo naftaada tartankaaga. Maaddaama ay soo saaraan dalabyo, wadaagaan aqoonsi, oo ay hagaajiyaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda, aad baad u badan tahay.
Kala-beddelidda Dib-u-Celinta - ma tahay isbeddelkaaga ururinta macdanta ama macaamiisha oo sii kordhaya ama yaraanaya? Sidee u fududeyneysaa Ma sheekeysaa? Guji-Wicitaan? Foomamka si fudud loo isticmaali karo?
Shaacbaxaya Technologies - maadaama teknoolojiyada cusub la filayo, ma fulineysaa iyaga? Booqdaha websaydhka maanta wuxuu leeyahay rajooyin aad u kala fog, oo doonaya inuu iskiis u adeegto. Hal tusaale oo weyn waa jadwalka ballanta.
Horumarinta Naqshadeynta - bandwidth, qalabka, cabbirka shaashadda… tiknoolajiyaddu waxay sii wadaa inay sii socoto oo ay qaabeyso khibrad isticmaale oo la jaanqaadi kara isbeddeladan waxay u baahan tahay isbeddel joogto ah
Dhiciyaan Search Engine - tusaha, boggaga macluumaadka, daabacaadaha, boggaga wararka, iyo kuwa kula tartamaya dhammaantood waxay isku dayayaan inay kugu garaacaan matoorada raadinta maxaa yeelay isticmaaleyaashaas ayaa leh ujeedka ugu weyn ee ay wax ku iibsadaan. La socoshada darajooyinkaaga ereyga muhiimka ah iyo ka-habeynta waxyaabaha aad ka kooban tahay ayaa muhiim u ah in lagu sii hayo waxyaabaha muhiimka ah.
Hay'ad kastoo suuqgeyn ama xirfadle ah oo aad shaqaaleyso waa inay si taxaddar leh ula socdaan warshadahaaga, tartankaaga, kala duwanaantaada, alaabadaada iyo adeegyadaada, sumaddaada, iyo istiraatiijiyaddaada isgaarsiinta. Ma ahan inay si fudud ugu jeesjeesaan nashqad kadibna qiimeeyaan hirgelinta nashqaddaas. Haddii intaas uun ay samaynayaan, waa inaad heshaa lamaane suuq -geyn oo cusub oo aad la shaqayso.
Maalgashi Nidaamka Suuqgeynta Dijital ah, Maahan Mashruuc
Websaydhkaagu waa isku-darka teknolojiyadda, qaabeynta, hijrada, isku-dhafka, iyo - dabcan - waxyaabaha aad ka kooban tahay. Maalinta aad website cusub nool ma aha barta ugu dambeysa ee mashruuca suuqgeyntaada dhijitaalka ah, macno ahaan waa Maalintii 1 ee dhisitaanka joogitaanka suuqgeynta dhijitaalka ah. Waa inaad lashaqeysaa lamaane kaa caawinaya inaad aqoonsato qorshaha guud ee howlgelinta, mudnaanta koowaad u yeelato marxalad kasta, iyo ka caawinta fulinta taas.
Hadday taasi tahay olole xayaysiis, sameynta istiraatiijiyad fiidiyow ah, khariidaynta safarrada macaamiisha, ama qaabeynta bogga soo degitaanka should waa inaad maalgashataa lammaane fahamsan sida wax walba u wada shaqeeyaan. Taladaydu waxay noqon doontaa inaad tuurto miisaaniyadaada websaydhka ah, halkii, aad go'aamiso maalgashi aad jeceshahay inaad sameyso bil kasta si aad u sii wadato fulinta istiraatiijiyadda suuqgeynta dijitaalka ah.
Haa, dhisida a website cusub waxay ka mid noqon kartaa istiraatiijiyadda guud, laakiin waa geeddi-socod horumarineed oo isdaba-joog ah project maahan mashruuc waligiis la dhammaystirayo.
Tags: hay'addahorumar joogto ahHagaajinta beddelkaWebsite Cusubmiisaaniyadda websaydhkakharashka websaydhkaqaabeynta bogga